သင့်အားခိုင်မြဲစွာဆွဲကိုင်လိမ့်မည်အကျဉ်းချုပ | He Will Hold You Fast! | Real Conversion
ဇွန်လ ( ၂၈ ) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
"ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အ စဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့ခမည်း တော်၏လက်မှ မနှုတ်မယူရာ။" ( ယောဟန် ၁ဝး ၂၈ )
ဤသို့သောကတိတော်များကို မယုံကြည်သူများအား လုံးဝမဟောမပြောသင့်ပါဟုဆို သည့် တရားဟောဆရာတစ်ပါး၏စကားကို သတိရမိသည်။ သူက ပျောက်ဆုံးသူများသည် အလွန်အကျွံစိတ်ချမှုရှိကြသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ထိုအရာက သူတို့ကို ပြစ်မှားကျူးလွန်စေသည်။ သူတို့ကို မလွယ်ကူသည့်အခြေအနေတွင် ထိန်းသိမ်းထားရပြီး သူတို့သည် အဆုံးတိုင်အောင် "ကြံ့ကြံ့ခံနိူင်ခြင်း" မရှိမည်မှာ သေချာသည်။ ထိုအရာကို ခဏတာတော့ယုံကြည်ခဲ့မိသည်။ ရိုးသားပွင့်လင်းသောခရစ်ယာန်များက ထိုအမြင်မျိုးကို စွဲကိုင်ကြပါသည်။ ထိုအချက်ကိုယုံ ကြည်သောတရားဟောဆရာများသည် ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ကြောက်လေ့ရှိကြပါသည်။
သို့ရာတွင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်က ပထမဆုံးနေရာတွင် ဤအချက်ကိုဟောပြော ခဲ့သည်ကိုကြားခဲ့သောလူများအား ကျွနု်ပ်တို့ကြည့်ရှုသင့်ပါသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၃၁ အရ၊ "သူတို့ သည် ခဲနှင့်ပစ်ခြင်းငှါ တဖန်ကျောက်ခဲတို့ကိုကောက်ယူကြသည်" ဟုဆိုထားသည်။ ( ယော ၁ဝး ၃၁ ) ခရစ်တော်က ထိုသို့ပြောသည်ကို သူတို့မုန်းတီးကြသည်။ ခရစ်တော်သည် ဤသတင်းစကားကို မယုံကြည်သူများအား မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်တို့ကြားထဲတွင်လည်း မယုံ ကြည်သူအချို့ရှိမည်ဟု ယုံကြည်မိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် ဝတ်ပြုအစီအစဉ်တိုင်းတွင် ကယ် တင်ခြင်းမရရှိသေးသောသူများလာရောက်နိူင်ရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြသည်၊ ကြိုးစားဆု တောင်းကြသည်။ ယေရှုခရစ်က မယုံကြည်ဘဲစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေသောသူများအား ပြော ဆိုခဲ့သောစကားအတိုင်း ယနေ့လည်း ကျွနု်ပ်ပြောဆိုရပေမည်။
"ထာဝရအသက်ကိုလည်း သူတို့အား ငါပေး၏။" ကျမ်းစာ၏ဆိုလိုရင်းတွင် "သူတို့" ဟူ သည်မှာ ခရစ်တော်၏သိုးများကို ဆိုလိုပေသည်။ "ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကိုနားထောင်၍ငါ့ နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ထိုသိုးတို့ကို ငါသိ၏။" (ယော ၁ဝး ၂၇ ) "ထာဝရအသက်ကိုလည်း သူတို့အား ပေးတော်မူသည်။" ကျွနု်ပ်တို့က လူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုခန့်မှန်းပြီး ခရစ်တော်၏သိုး ဖြစ်သည်၊ မဖြစ်သည်ကို မဝေခွဲနိူင်ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့အသုံးပြုထားသောကျမ်းပိုဒ် မတိုင်မှီကျမ်းပိုဒ် က ဘုရားသခင်၏လူတို့သည် အဘယ်သို့သောသူများဖြစ်သည်ကို ကျွနု်ပ်တို့အားပြောပြသည်။ "ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကိုနားထောင်၍ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏။" စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်၏ ၀ိသေသလက္ခဏာမှာ ဤသို့သောအရာများဖြစ်သည်-- သူတို့သည် ခရစ်တော်၏စကားကို ကြားကြသည်၊ သူတို့သည် ခရစ်တော်ကိုသိကြသည်၊ ခရစ်တော်သည် သူတို့ကိုသိသည်၊ သူတို့သည် ခရစ်တော်ကို နာခံလျက်လိုက်ကြသည်။ ဤသည်မှာ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်၏ ၀ိသေသလက္ခပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဤသည်မှာ ခရစ်တော်မိန့်မှာတော်မူသော သူတို့၏အ ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။
"ထာဝရအသက်ကိုလည်း သူတို့အား ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့ခမည်း တော်၏လက်မှ မနှုတ်မယူရာ။" ( ယောဟန် ၁ဝး ၂၈ )
"မေတ္တာဖြင့်လုပ်ဆောင်သောယုံကြည်ခြင်း" (ဂလာတိ ၅း ၆ ) သည် ခရစ်တော်၏စစ်မှန် သောသိုးတို့၏အမှတ်လက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့အား ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ၊ "ထာဝရ အသက်ကိုသူတို့အား ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့် မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့ခမည်းတော်၏လက်မှ မနှုတ်မယူရာ" ဟုဆိုထားသည်။ ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones က၊ "ကျွနု်ပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ လွတ်မြောက်ခြင်းအခြေ အနေတွင် မရှိပါ၊ ထို့အပြင် ကျွနု်ပ်တို့သည် ကျေးဇူးတော်မှ ပြန်၍လဲကျစရာအကြောင်းလည်း မရှိပါ" ဟုဆိုသည်။ (စိတ်ချမှု (ရောမ ၅) The Banner of Truth Trust, ၁၉၇၁၊ စာ- ၂၃၆)
လူတစ်ယောက်က၊ "ကျွနု်ပ်သည် ဧဝံဂေလိတရားဆိုးတွင်ရှိနေသည်။ ခရစ်တော်ထံ သို့လာရမည်ကို ကျွနု်ပ်သိသည်၊ သို့သော်မလာနိူင်ကြောင်းလည်း သိသည်။ ကျွနု်ပ်လာရမည်၊ သို့သော်မလာနိူင်ပါ။ ကျွနု်ပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း" ဟုဆိုနိူင်သည်။ အဖြေမှာ ရိုးစင်းလွန်းပါ သည်။ ခရစ်တော်၌ ဆက်ကပ်အပ်နှံပါ။ သူ့ထံသို့အော်ဟစ်ပါ။ သင်၏မေးခွန်းမှန်သမျှကို သူအ ဖြေပေးပါလိမ့်မည်။ သူသည် ဧဝံဂေလိတရားဆိုးကိုချေဖျက်ပြီး သင်၏ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင် တော်မူမည်။ "ထိုအရာကို ကျွနု်ပ်နားမလည်ပါ" ဟု သင်က ဆိုပေမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ဤသည်မှာ နက်နဲသောအရာဖြစ်သည်။ ဂရိစကားလုံးမှာ "မာစတာလိရွန်" ဖြစ်သည်။ ဆိုလို သည်မှာ လူ့ဉာဏ်ပညာအားဖြင့်နားမလည်နိူင်သောအရာကို ဆိုလိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ၄င်း သည် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် မှန်ကန်သောအရာပင်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက "ဤကမ္ဘာမတည်မရှိမှီ၊ ငါတို့၏ဘုန်းအသရေဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသောပညာ နက်နဲသောအရာ၌ဝှက်ထားသော ဘုရားသခင်၏ပညာကို ငါတို့သည်ပြသကြ၏။.." ဟုဆိုထား ပါသည်။ ( ၁ကော ၂း ၇ ) မိမိကိုယ်ကို ခရစ်တော်၌ ပုံအပ်ထားပါ။ သူ့ကို ကိုးစားပါ။ သူ၏မေး ခွန်းမှန်သမျှကို သူ၌ဖြေကြားနေပေမည်။ သူသည် သင့်အား အသွေးတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်း အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။ အဆုံးထိတိုင် သင့်ကို ကူမလိမ့်မည်။ ထိုအရာရှိသမျှအား ဖြင့် သင့်အား စောင့်ထိန်းလိမ့်မည်။ သင်သည်လည်း ခရစ်တော်၏ သိုးတော်စုအဝင်ဖြစ်လာပေ မည်။
ခရစ်တော်၏သိုးတော်စုများ၏ထာရလုံခြုံစိတ်ချမှုယုံကြည်ခြင်းအတွက် အကြောင်းတရားသုံးခု ကို ကျွနု်ပ်တို့အသုံးပြုထားသောကျမ်းပိုဒ်၏ စာကြောင်းသုံးကြားက ထင်ဟပ်စေပါသည်။
၁။	ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်ပေးသောဆုကျေးဇူးရှိသည်။
ပထအအချက်အနေဖြင့် ကယ်တင်ရှင်ပြေဆိုထားသည်မှာ "ထာဝရအသက်ကို သူတို့ အား ငါပေးသည်" ဟုဆိုထားသည်။ ထာဝရအသက်ဟူသည်မှာ ကျွနု်ပ်တို့ထံသို့ ဆုကျေးဇူး တစ်ခုအဖြစ်ရောက်လာပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် မွေးဖွါးလာသည်တွင် ထာဝရအသက်ကို ပိုင် ဆိုင်ထားကြသည်မဟုတ်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အာဒံ၏သားများအနေဖြင့်မွေးဖွါးလာသည်။ ကျွနု်ပ် တို့သည် သေရန်သာမွေးဖွါးလာကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်လည်း ရရှိ ထားသည်မဟုတ်။ ကောင်းသောအရာကို လုပ်ဆောင်ထားခြင်းအားဖြင့်လည်း ရရှိထားခြင်းမ ဟုတ်ပါ။ ကျမ်းချက်များကို သင်ယူလေ့လာခြင်းအားဖြင့်လည်း မရယူနိူင်ပါ။ ဆုတောင်းစာ ရွက်ဆိုခြင်းအားဖြင့်လည်း မရရှိနိူင်ပါ။ ဆုလဒ်သာဖြစ်သည်။ ဆုလဒ်ဖြစ်သောကြောင့် ကြိုးစား ရယူနိူင်ခြင်းမရှိ။ လူတစ်ယောက်သည် ထာဝရအသက်ကိုရရှိသောအချိန်တွင် အခမဲ့လက် ဆောင်သာဖြစ်သည်။ ဆုလဒ်အနေဖြင့် ရရှိထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အခမဲ့ဆုလက်ဆောင်သာဖြစ် သည်။
ဘုရားသခင်သည် အဆုံးကို အစကတည်းက သိတော်မူသည်။ သူသည် လူတစ်ဦး အားထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူသည်တွင် လူအထဲတွင်ရှိသည့် မစုံလင်မှုနှင့်ကျဆုံးမှုများကို သိထားသည်။ လူသည် တခါတရံလဲကျတော်မူမည်အကြောင်းကိုလည်း ကြိုတင်သိထားတော် မူသည်။ လူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူပြီး ဆုံးရှုံးမှုများကို အဝေးသို့ပယ်ရှားတော်မူ သည်။ သူသည် လူတို့၏ဆုံးနိမ့်မှုများကို ကြိုတင်သိနှင့်တော်မူသောကြောင့် အခမဲ့ဆုလဒ်ကို ပေးတော်မူခဲ့သည်။
သင့်ကိုထာဝရအသက်ပေးစေခြင်းငှါ အသေခံတော်မူသည်ဟူသောအရာမှာ အဘယ် သို့ဖြစ်နိူင်ပါမည်နည်း။ ယေရှုက "ထာဝရ" ဟုဆိုသောအချိန်တွင် "ထာဝရ" ကိုသာဆိုလို သည်။ စပါဂျွန်က "ကျွနု်ပ်သည် မည်သို့ပင်ဆိုစေ ၀ိညာဉ်အသက်တာကို ဆုံးရှုရန်အလိုငှါ အပြစ်ပြုနိူင်ရန် မဖြစ်နိူင်ပါ" ဟုဆိုထားပါသည်။
ယေရှုက ရေတွင်းနားတွင် မိန်းမအား စကားပြောသည့်အချိန်တွင် ဤသို့ဆိုထား သည်။
"ငါပေးသောရေကို သောက်သောသူမူကား၊ ရေငတ်ခြင်းနှင့်အစဉ် မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ငါပေးသောရေသည် ထိုသူ၌ ထာဝရ အသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငှါ ထွက်သောစမ်းရေဖြစ်လိမ့်မည်။ " ( ယောဟန် ၄း ၁၄ )
ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းသမ္မာကျမ်းစာလေ့လာချက်က "ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက ရည်ညွှန်းပြောဆို ထားသောသက်စမ်းရေမှာ စီးဆင်းသောရေကိုဆိုလိုပြီး ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်မှုကို ရည် ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်" ဟုဆိုသည်။ "ထွက်သောစမ်းရေ"ဟူသည်မှာ ၄င်း၏ကြွယ်ဝချမ်း သာခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ "ထာဝရအသက်" ဟူသည်မှာ အဆုံးမရှိဘဲ ထာဝရကာလစီးဆင်းမှု ကို ဆိုလိုသည်။ ၄င်းမှာ လူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့စီဆင်းသည့် ဘုရားသခင်၏အသက်ပင်ဖြစ် သည်။ ယေရှုသည် ၄င်း၏သိုးများအား သူတို့၏စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် ဘုရားသခင်၏အဆုံးမရှိ သောအသက်ကိုပေးတော်မူပြီး ဘယ်တော့မှ မဆုံးနိုင်သောအဖြစ်၌ စီးမြဲစီးဆင်းစေပါသည်။ ထိုအရာသည် ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုးစားအားထုတ်လျက် ရရှိနိူင် သောအရာမဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်ထံမှလာသော ဆုကျေးဇူးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ပေးထားပြီးသောအရာကို ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းမပြုပါ။
လူတစ်ယောက်က "အဘယ့်ကြောင့် မဆုတ်ကိုင်နိူင်သနည်း၊ အဘယ့်ကြောင့် အရှုံး ပေးထားရသနည်း" ဟု ဆိုပေမည်။ ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ သင်သည် အလယ်ခေတ်ရိုမင်ကစ်သ လစ်များကဲ့သို့ပင် စဉ်းစားနေပါသေးသည်။ သင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ရရှိထားခြင်းမ ဟုတ်ပါ။ အဘယ်သို့ ထိုသို့ဖြစ်နိူင်မည်နည်း။ သင်သည် "အပြစ်တရား၌ သေလျက်ရှိပါသည်။" လူသေသည် အဘယ်သို့ဖမ်းဆုတ်ရယူနိူင်မည်နည်း။ လူသေသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် တစ် စုံတစ်ခုကို အဘယ်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါ။ သမ္မာကျမ်း စာက ဤသို့ဆိုသည်။
" ဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေသောငါတို့ကို ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ်တင် ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။"(ဧဖက် ၂း ၅ )
သေလျက်ရှိသောသူတို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူပြီ။ ထာဝရအသက်ဟူသည် ဆု ကျေးဇူး၊ အပြစ်၌သေလျက်ရှိသော ယောကျ်ား၊ နှင့်မိန်းမတို့အား ပေးတော်မူသည်။ ၄င်းမှာ ဧဝံ ဂေလိသတင်းကောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းပါ၏။ "ထာဝရအသက် ကိုလည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အ စဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။" ( ယောဟန် ၁ဝး ၂၈ )
သူသည် ကျွနု်ပ်ဝိညာဉ်အား မဆုံးရှုံးစေပါ၊ ခိုင်မြဲစွာဆုတ်ကိုင်မည်၊
ကျွနု်ပ်သခင် ကျွနု်ပ်ကိုချစ်သည်၊ ခိုင်မြဲစွာဆုတ်ကိုင်ထားမည်။
("ကျွနု်ပ်ကိုခိုင်မြဲစွာစွဲကိုင်မည်" Ada R. Habershon ၁၈၆၁-၁၉၁၈ ရေးစပ်သည်။ )
စပါဂျွန်က "ကျွနု်ပ်တို့သည် ယုံကြည်သူများ အဆုံးတိုင်အောင်တည်ခြင်းခြင်းကို မျှော်လင့်ပါ သည်။ အကြောင်းမှာ သူ့အသက်တာထဲ၌ ဘုရားသခင်စိုက်ပျိုးရှင်သန်စေသောအသက်သည် ဆက်လက်ရှင်သန်ရမည်၊ အခက်အခဲမှန်သမျှကို ကျော်ဖြတ်နိူင်ရမည်၊ သီးပွင့်ရင့်သန်မှည့်ရ မည်၊ ထာဝရဘုန်းတော်ကို ဆောင်ကြဉ်းနိူင်ရမည်ဖြစ်သည်" ဟု ဆိုထားသည်။ (စီအိတ်ချ်စပါ ဂျွန်၊ "ယူဆချက်မရှိဘဲ ထိန်းသိမ်းထားခြင်း"၊ အမ်ပီထီ၊ နံပါတ် ၁၀၅၅ ) ထိုသို့ဖြစ်ရမည်၊ ထိုသို့ ဖြစ်ရမည်။ ထာဝရဘုန်းတော်ကို ဆောင်ကြဉ်းနိူင်ရမည်။ ထိုအရာသည် ဆုကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်ပေးသောဆုလဒ်ပင်ဖြစ်သည်။ သူက "ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၏" ဟုဆို၏။ နာမတော်ချီးမွမ်းခြင်းရှိပါစေသော်။ သူသည် ကျွနု်ပ်တို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူ သည်။ အဖိုးအခပေးစရာမလိုအပ်ပါ။ ထိုအရာအတွက် ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ထိုအ ရာကို ကျွနု်ပ်တို့အဖို့ ရယူပေးခဲ့သည်။
ဟာလေလုယာ၊ အမှုပြီးပြီ၊ သားတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏၊
("ဟာလေလုယာ၊အမှုပြီးပြီ" ၊ Philip P. Bliss ၁၈၃၈-၁၈၇၆ ရေးစပ်သည်။ )
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ခရစ်တော်၏ကတိတော်ရှိသည်။
"ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်း လွှတ်ရကြလိမ့်မည်…" ယေရှုက "ဤအမှုကိုပြုသည်" ဟုဆိုသည်။ အံ့ဘွယ်အမှုပင်ဖြစ်ပါ သည်။ "ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။" ထိုသို့ပြောခြင်းအတွက် ကျွနု်ပ်ဝမ်းသာ ပီတိဖြစ်မိသည်။ လူအချို့တို့က သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အသက်ရှင်သွားလာကြ မည်ဟုဆိုကြသည်။ သူတို့က ဘုရားသခင်ထံမှ ထွက်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ကြပေလိမ့်မည်။ သို့ သော် ဤစာစု "သူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်" က ထိုအယူအဆနှင့် အတူ နည်းလမ်းတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပေလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ အချိန်တိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါ သည်။ "သူတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။" သူတို့သည် အသိပညာဗဟု သုတအနည်းငယ်သာရှိသည့် လူငယ်များဖြစ်ကြသလော။ သူတို့သည် ပြောင်းလဲခါစမိုး ယုံ ကြည်ခြင်း အနည်းငယ်သာရှိကြပါသလား။ "ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့် မည်။" သူတို့သည် အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်တွင် ဘဝပြဿနာများသည် ၄င်းတို့၏ကနဦး ယုံကြည်ခြင်းကို ထင်ရှားလာစေပြီး ၄င်းတို့သည် လောကဆန်ဆန်အသက်ရှင်ကြပြီး ယုံကြည် ခြင်းကိုပင် ဆုံးရှုံးကြပေမည်လော။ "ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။" လော ကစည်းစိမ်းက သူတို့ကိုဖျက်ဆီးလျှင် သူတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြနိူင်သည်။ မကောင်းသောအမှုအရာက သူတို့ကို တဖန်ကျွန်ပြုလျှင် ပျက်စီးကြလိမ့်မည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ "သူတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြပေလိမ့်မည်။" အချိန်တိုင်းကို သမ္မာ ကျမ်းစကား "ဘယ်တော့မှ" ဟူသည်က ချိတ်ပိတ်ထားသည်။ သူတို့သည် ကြီးမားသည် သွေး ဆောင်ခြင်းကို ခံရလျှင်ကား အဘယ်သို့နည်း။ "သူတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်း လွတ်ကြလိမ့်မည်။" သူတို့၏မေတ္တာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကွယ်ပျောက်သွားလျှင် အဘယ် သို့နည်း။ "သူတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။" အပြစ်သည် သူတို့ ကို နောက်တဖန် အစိုးမရပါ။ "သူတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။"
ကျွနု်ပ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်သည်မှာ ငါးဆယ့်လေးနှစ်တောင်ရှိပါပြီ။ ဘုရားသခင်သည်အဝေး ဆုံးတွင် ရှိနေသည်ဟုထင်ရသည့်အချိန်တွင်လည်း အချိန်ကာလဆိုသည်မှာ ရှိသည်။ ကျွနု်ပ် က မိမိကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး သံသယဖြစ်သည့်အချိန်တွင်လည်း အချိန်ကာလဟူ သည်ရှိ၏။ ကျွနု်ပ်ခြေချော်ပြီး ထာဝရရှုံးပြီးဟု တွေးတောစဉ်တွင်လည်း အချိန်ဆိုတာရှိ၏။ သို့သော် ယေရှုက ကျွနု်ပ်ကို ထိုအရာများကျော်ဖြတ်လျက်ဆောင်ယူခဲ့သည်။ စိတ်ပျက်စရာနေ ရာမှ ယေရှုက ပြန်လည်နှုတ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်သည် ခရစ်ယာန်မိသားစုမှ မွေးဖွါးကြီးပြင်း လာသူမဟုတ်။ ကျွနု်ပ်အတွက် အတုယူစရာစံနမူနာကောင်းများမရှိပါ။ မကောင်းသည့်လေမုန် တိုင်းသည် ကျွနု်ပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်သည် ပျက်စီးမတတ်ဖြစ် ခဲ့ပါသည်။ လဲကျသောသူများစွာကို ကျွနု်ပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်က သူတို့နှင့်အတူလွင့်ပါလေ မလားလို့တွေ့ခဲ့မိသည်။ ကျွနု်ပ်သည် ဆက်မသွားနိူင်အောင် အားအင်ချိနဲ့နေသည်။ အပြင်တွင်စွန့်ပစ်ခံတစ်ယောက်အနေဖြင့် ခံစားမိသည်။ ဒါ၀ိဒ်က ၄င်း၏ရန်သူ ဘုရင်ရှောလု လက်က ပုန်းရှောင်နေစဉ် လှိုင်ဂူထဲရောက်နေသည့်အချိန်က ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
"လကျင်္ာဘက်သို့ အကျွနု်ပ်ကြည့်ရှုသောအခါ၊ အကျွနု်ပ်သိကျွနု်ပ် သောသူမရှိပါ။ ပြေးလွတ်ရာလမ်းလည်း ပိတ်ပါ၏။ အကျွနု်ပ်အ သက်ကို နှမြောသောသူမရှိပါ။" (ဆာလံ ၁၄၂း ၄ )
"ငါ့ခြေချော်လျက်ရှိသည်ဟု အကျွနု်ပ်ဆိုသောအခါ၊ အိုထာဝရဘု ရား၊ ကိုယ်တော်၏ကရုဏာသည် အကျွနု်ပ်ကိုထောက်မပါ၏။" (ဆာလံ ၉၄း ၁၈ )
ထိုအကြောင်းအရာကို အတွေ့အကြုံအားဖြင့် ကျွနု်ပ်သိသည်။ "ငါ့ခြေချော်လျက်ရှိသည်ဟု အကျွနု်ပ်ဆိုသောအခါ၊ အိုထာဝရဘု ရား၊ ကိုယ်တော်၏ကရုဏာသည် အကျွနု်ပ်ကို ထောက် မပါ၏။" ယေရှုသည် အကျွနု်ပ်အား သမ္မာတရားကိုမိန့်မြွတ်တော်မူသည်အကြောင်း အတွေ့ အကြုံအားဖြင့် ကျွနု်ပ်သိရသည်။ "ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ရကြလိမ့်မည်။ ငါ့လက်မှ အဘယ်သူမျှ မနှုတ်မယူရ။" ဤသည်မှာ ကျွနု်ပ်အတွက် သြဝါဒသက်သက်မဟုတ်။ သခင်ယေရှု၏နှုတ်တော်မှထွက်သော အသက်ရှင်သော သမ္မာတရားပင်ဖြစ်သည်။ "ထာဝရ အသက်ကိုလည်း ငါပေး၏။ သူတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။
မိမိကိုယ်ကိုစွဲမြဲစွာမကိုင်နိူင်၊ သူသည် ခိုင်မြဲစွာ စွဲကိုင်လို့ထား၊
လူငယ်တို့၊ အကျွနု်ပ်သည်လည်း ငယ်သောအရွယ်မှလာပြီး ယခုအသက်ကြီးလာပြီ။ ယေရှု၏ကတိတော်သည် အမှန်အကန်ဖြစ်သည်ကို ငါသိသည်။ ကျွနု်ပ်၏အရိုးအကြောအထိ မှန်ကန်သည်ကို ကျွနု်ပ်သိသည်။ "ငါ့ခြေချော်လျက်ရှိသည်ဟု အကျွနု်ပ်ဆိုသောအခါ၊ အိုထာ ဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏ကရုဏာသည် အကျွနု်ပ်ကို ထောက်မပါ၏။" ယေရှုက သမ္မာတရား အကြောင်းပြောသည်ကို ကျွနု်ပ်သိပါသည်။
"ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အ စဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့ခမည်း တော်၏လက်မှ မနှုတ်မယူရာ။"
သူသည် ကျွနု်ပ်ကိုစွဲမြဲစွာကိုင်သည်။ သူသည် ကျွနု်ပ်ကိုစွဲမြဲစွာကိုင်သည်။ သင့်အတွက်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်မည်ကိုလည်း ကျွနု်ပ်သိသည်။ ထို့ကြောင့်သာလျှင် ကျွနု်ပ်၏ကယ် တင်ရှင်၊ ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားရန် ကျွနု်ပ်က သတ္တိရှိရှိပြောနေရသည်။ ကျွနု်ပ်သည် လွန်ခဲ့ သောနှစ်ပေါင်းများစွာက သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးစားခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်သည် ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ် ကင်းလွတ်လျက်ရှိသည်။ သင်လည်း သူ့ကို ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် သင့်အားလည်း ပျက်စီးခြင်း သို့ရောက်စေမည်မဟုတ်။ ထိုအရာမှာ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့သည့် ကတိတော်ဖြစ်သည်။
၃။	တတိယအချက်၊ ခရစ်တော်၏တန်ခိုးတော်ရှိသည်။
"အဘယ်သူမျှ ငါ့လက်မှ မနှုတ်မယူနိူင်ရာ။" (ယောဟန် ၁ဝး ၂၈ ခ ) "လူ" ဟူသော စကားလုံးတွင် King James ကျမ်းစာတွင် စလုံးစောင်းဖြင့် ရေးသားထားပါသည်။ ဆိုလိုသည် မှာ KJV ဘာသာပြန်ဆိုသူများသည် "လူ" ဟူသောစကားလုံးကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြပါ သည်။ အကြောင်းမှာ ဂရိကျမ်းစာမဟုတ်ပါ။ ဂရိစကားလုံးမှာ "tis" ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ "တစ်စုံတစ်ယောက်" ဖြစ်သည်။ ( George Ricker Berry ) သို့မဟုတ် "လူတစ်ဦးတစ် ယောက် သို့မဟုတ် ခံရသူ" ဖြစ်သည်။ ( ခိုင်မာသော) ထို့ကြောင့် ဂရိဆရာကြီး အေထီရော ဘတ်ဆန်က ဤကျမ်းပိုဒ်အကြောင်းကို ပြောပါသည်။ "သိုးသည် ဝံပုလွေ၊ သူခိုး၊ ဓါးမြ၊ သူငှါး၊ မာရ်နတ် များမရှိသကဲ့သို့ လုံခြုံမှုရှိပါသည်။ မာရ်နတ်သည်လည်း သိုးများကို ငါ၏လက်မှ မနှုတ်မယူရာ" ဟုဆိုထားသည်။ ( စာလုံးကားချပ်၊ ယောဟန် ၁ဝး ၂၈ မှတ်စု ) ဒေါက်တာ ရောဘတ်ဆန်က ယောဟန် ၆း ၃၉ ကိုးကားချက်တစ်ခုကို ပေးထားသည်။
"ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်၏အလိုတော်ကား၊ ငါ့အား ပေးသောသူတို့တွင် တစုံတယောက်ကိုမျှ ငါမပျောက်စေရဘဲ၊ နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ထိုသူအပေါင်းတို့ကို ထမြောက်စေခြင်းငှါ ၄င်း၊" ( ယောဟန် ၆း ၃၉ )
တဖန် ဒေါက်တာရောဘတ်ဆန်က ယောဟန် ၁ရး ၁၂ ကို ကိုးကားချက်တစ်ခုပေးထားပါ သည်။ "..ကျွနု်ပ်ထိန်းသိမ်းထားသည်…. သင်ပေးသမျှကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အဘယ်အရာ မျှမပျောက်မဆုံးပါ…" တဖန် သူက ကောလောသဲ ၃း ၃ ကိုလည်း ကိုးကားချက်တစ်ခုပေးထား သည်။ "…သင်တို့၏အသက်သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ဘုရားသခင်၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်.." New King James ကျမ်းစာတွင် ၄င်းကို "အကျွနု်ပ်လက်မှ အဘယ်သူမျှ နှုတ်ယူမည်မဟုတ် ပါ။"
စပါဂျွန်က "သင်သည် ကျမ်းပိုဒ်ထဲက ကျွနု်ပ်တို့မတိုင်မှီတွင် "လူ" ဟူသောစကားလုံး ကိုဖတ်ရှုရန် ဖတ်ရှုရန်မလိုသည်ကို သိသည်။ အကြောင်းမှာ မူရင်းဂရိစကားလုံးမဟုတ်ပါ။ ထို့ ကြောင့် သူတို့ကို အဘယ်သူမျှ ငါ့လက်မှမနှုတ်မယူရ ဟုလည်း မဖတ်နိူင်ပါ။ "လူ"သာမဟုတ်၊ နတ်ဆိုးလည်း ထိုသို့မဖတ်ပါ။ ၄င်းက တခါတရံကျွနု်ပ်တို့၏အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်တတ်သည့်လူ များကို ထည့်သွင်းရုံမျှသာဖြစ်သည်။ ကျဆုံးသောကောင်းကင်တမန်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ သို့သော် သူ၏လက်တော်မှ ငါတို့ကို အဘယ်သူမျှ မနှုတ်မယူရာ။ အဘယ်သူမျှလုပ်ဆောင်နိူင် ဘို့ဖြစ်နိူင်ခြေမရှိ။ အဘယ်စီမံချက်ကမျှ ငါတို့အား သူ၏ပိုင်ဆိုင်ထားသောအရာမှ၊ ချစ်သော သား၊ သူအကာအကွယ်ပေးထားသည့်ကလေးများအဖြစ်မှ ဖယ်ရှားပေးနိူင်မည့်သူမရှိပါ။ အံ့ ဘွယ်ကတိတော်ပါတကား။" ဟုဆိုထားသည်။ (ထပ်၍)
သင်းအုပ် Wurmbrand ကို သတိရပါ။ Tortured for Christ စာအုပ်ကို အဘယ့် ကြောင့်ထပ်ခါတလဲလဲဖတ်နေရသည်ကို သင်အံ့သြနေပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့အံ့ဘွယ်စာအုပ်အ ဘယ်သို့ဖတ်ရန်နှစ်သက်သည်ကို သင်အံ့သြပေလိမ့်မည်။ အကြောင်းပြချက်ရှိပါသည်။ အနိငှါရုံစွဲလန်းမှုတစ်ခုကို ကျွနု်ပ်မဖတ်ပါ။ သို့မဟုတ် အသွေးတော်နှင့်သွေးထွက်သံယိုမှုနှင့် ဆိုင်သည့်မေတ္တာအကြောင်ကို ကျွနု်ပ်မဖတ်ပါ။ သူ၏စာအုပ်ကို ကျွနု်ပ်ဖတ်ရှုရသည်။ အ ကြောင်းမှာ ယေရှုသည် ၄င်း၏ကတိတော်ကိုစောင့်ထိန်းတော်မူသည့်တန်ခိုးကိုပြလျက် ငါ့ကို ဆွဲဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒရှိသူများသည် သင်းအုပ် Wurmbrand အား ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားခြင်းကြောင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြသည်။ သူသည် မတ်တပ်ရပ်လျက် တရားဒေသနာဟောပြောနိူင်ခြင်းမရှိအောင် ခြေထောက်များကိုရိုက်နှက်ကြသည်။ သူသည် ကျွနု်ပ်တို့၏အသင်းတော်တွင် တရားဟောသည့်အချိန်တွင် သူ၏ဖိနပ်ကိုချွတ်၍ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ထိုင်သည်။ အကြောင်းမှာ သူခြေထောက်၏အမာရွတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဆယ့်ရှစ် ပေအနက်ရှိအခေါင်းတွင် သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ပူပြင်းသည့်မီးပူနှင့်အတူချထားခဲ့ကြသည်။ သူ့ကို နာရီပေါင်းများစွာမတ်တပ်ရပ်စေကြသည်။ သူ့ကို အစာငတ်ခံစေကြပါသည်။ သူ့ကို ကြွတ်များ ရှိသည့်အခန်းတွင် သော့ခတ်ထားခဲ့ကြသည်။ လပေါင်းများစွာလူတို့အသံကြားမရနိူင်သည့် တစ်ဦးတည်းအကျဉ်းခံနေရသည့်နေရာတွင် ထားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ထိုအရာအားလုံးကို သူကျော်ဖြတ်နိူင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်တွင် အကြိမ်များစွာလာရောက်ဟောကြား ခဲ့သည်။ သင်က "သံပူလိုပြင်းပြသောဆန္ဒ သင်၌ရှိသည်" ဟုဆိုပေမည်။ ထိုသို့မဟုတ်။ သူသည်အလွန်အားနည်းသောသူဖြစ်သည်အကြောင်း သင့်အား ပထမဆုံးပြောကြားခြင်းဖြစ် ပါသည်။ သူသည် ထိုနှိပ်စက်မှုအားလုံးကို ကျော်ဖြတ်နိူင်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ခရစ်တော်၏ ကတိတော်သည် မှန်ကန်လျက်ရှိသည်။
ဤအကြောင်းသည် မှန်ကန်ကြောင်း ကျွနု်ပ်သိသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွနု်ပ်ဘဝတွင်ကြုံတွေ့ ရသောဒုက္ခတွင် ထိုသမ္မာတရားကို လက်တွေ့တွေ့ကြုံရသည်။ ခရစ်တော်၌မှီခိုအားထားပြီး ထာဝရအသက်ကို ရယူပါ။ ယေရှုသည် မုသာဝါဒကို မသုံးပါ။
ယခုတွင် စပါဂျွန်၏ပြောစကားကို တဖန်ကိုးကားပြီး အဆုံးသတ်လိုပါသည်။ ပုံပျက် ပန်းပျက်မကောင်းမှုနှင့်အပြစ်ထဲသို့လဲကျခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏ကနဦးအသက်တာများတွင် လုံး ဝသင်္ဘောပျက်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သည့် ကတိအထပ်ထပ်ပေးကြသော လူငယ်များအား ကျွနု်ပ် ငယ်ရွယ်သည့်အချိန်တွင် တွေ့ခဲ့ဖူးသည်။ ကျွနု်ပ်သည် စိတ်နှလုံးထဲတွင် သူတို့ပြုမှားသည် ဟု ကြားသိရသောအပြစ်ကိုမုန်းတီး သောစိတ်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သောအရာက [မိဘများ] က ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြသည်။ ကျွနု်ပ်ဆက်၍ကြောက်ရွံ့နေရသည့်အရာမှာ ဤသူငယ်များဖြတ်ကျော် သွားခဲ့ရသောအပြစ်သည် ကျွနု်ပ်ကိုစိုးမိုးနိူင်သည်။ ကျွနု်ပ်နှလုံးသား၏ဆိုးသွင်းခြင်းက ကျွနု်ပ် ကိုပျက်စီးစေနိူင်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်သည်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိလျှင်၊ အသစ်သော အသက်တာကိုရရှိထားခြင်းမရှိလျှင် လုံခြုံမှုမရှိနိူင်ကြောင်းကို သိသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် မာရ်နတ်၏ငါးမျှားစာကို ကျွနု်ပ်စားမိလိမ့်မည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာတွင် မိမိကိုယ်ကို ပျက်ပြားစေပြီး ကျွနု်ပ်သိထားသောလူငယ်လေးကဲ့သို့ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်မိသည်။ အတွေးက ကျွနု်ပ်ကို ခြောက်လှန့်သည်။ သို့သော် ယေရှုက ကျွနု်ပ်ကိုဆွဲဆောင်သောသြဝါဒထဲသို့လဲကျ ခြင်းမှထိမ်းသိမ်းပေးထားမည်အကြောင်း ကြားသိရသည့်အခါ ကျွနု်ပ်ကိုကယ်တင်နိူင်ကြောင်း မြော်လင့်ချက်များရှင်သန်လာသည်။ ကျွနု်ပ်သည် ယေရှုထံသို့သွားလျှင် နှလုံးသားအသစ်နှင့် မှန်ကန်သောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရရှိမည်ဟု စဉ်းစားလိုက်တိုင်း၊ အခြားသူများလဲကျသည့်အပြစ်ထဲ သို့လဲကျခြင်းမှ အကျွနု်ပ်ကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ သူသည် ကျွနု်ပ်ကို စောင့်ထိန်းသည်။ ထိုအကြောင်းအရာက ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားရန် ကျွနု်ပ်အားဆွဲဆောင်ထားသည်။ သူ၌ အပ်နှံသောသူတို့အပေါ်တွင် ယေရှုသည် သစ္စာရှိရှိစောင့်ထိန်းသူဖြစ်ကြောင်း၊ လူငယ်တစ် ယောက်အားဆောင်ယူပြီး သူ၏လမ်းကိုသန့်ရှင်းစေကာ အဆုံးတိုင်အောင်စောင်မတော်မူ ကြောင်းကြားသိသောအခါ အလွန်ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိပါသည်။ လူငယ်တို့၊ ယေရှုခရစ်ကို ယုံ ကြည်ခြင်းကဲ့သို့သောဘဝ၏အာမခံလုံးဝမရှိပါ။" ( စီအိတ်ချ် စပါဂျွန်၊ ထပ်၍ ၊ ခေတ်သစ်နား ထောင်သူများအဖို့ ဒေါက်တာ Hymers က လွယ်ကူစွာရှင်းလင်းထားပါသည်။ )
သင့်ထံ၌ အတွေးတစ်ခုပေါ်လာနိူင်သည်။ ကျွနု်ပ်က လူ့ရန်သူနှင့်နတ်ဆိုးများသည် ကယ်တင်ရှင်၏လက်မှ သင့်ကို နှုတ်ယူမရနိူင်ပါ။ "သို့ရာတွင်" သင်က "ကျွနု်ပ်အား ယေရှုထံမှ အဘယ်အရာက လှည့်ပြန်စေသနည်း။ ဘုရားကျောင်းကိုကျောခိုင်းပြီး လောကဘက်သို့ အဘယ်အရာက လှည့်ပြန်စေသနည်း။ ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ "ကျွနု်ပ်သည်ပင်" "အကြင်သူ သည်" ဟူသောစကားလုံးတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ မှားယွင်းသောပြောင်းလဲခြင်းရှိသောသူများ သည် အသင်းတော်ကိုကျောခိုင်းပြီး လောကဘက်သို့ပြန်လှည့်သည်ကို ကျွနု်ပ်တို့သိရှိကြ သည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် ခရစ်တော်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟူသောအမှတ်အသားကို မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ ကြပေ။ သူ၏အသံကိုလည်း နားမထောင်ခဲ့ကြပါ။ သူ့ကိုလည်း လုံးဝမသိခဲ့ကြပါ။ သူ့နောက် သို့လည်း မလိုက်ခဲ့ကြပါ။ သူတို့သည် အပြင်ပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်သာချခဲ့ကြပြီး၊ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း ခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် သင့်အား ကျွနု်ပ်မတောင်းဆိုလိုပါ။ ဘုရားသခင် ၏သားတော်၊ နာဇရက်မြို့သားယေရှုထံပါးသို့လာရန်သာ ခေါ်ဖိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး သူ၌အမှီသဟဲပြုရန်သာ တောင်းဆိုထားသည်။ စပါဂျွန်က "အိုအပြစ်သား၊ ခရစ်တော်၌သာ ယုံကြည်ကိုးစား အမှီပြုရန် ယနေ့ဦးဆောင်ပါရစေ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါစေ နှင့်။ ငါသိုးတို့အား ထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူသည်၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ် ကြလိမ့်မည်။ ငါ့သို့တို့ကို ငါ့လက်မှ အဘယ်သူမျှ မနှုတ်မယူနိူင်ရာ။" ဟုဆိုသည်။ ( ထပ်၍ )
ခမည်းတော်ဘုရား၊ ဤတရားဒေသနာကို နားထောင်သောသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖတ်ရှုသော သူပဲဖြစ်ဖြစ် ထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူမည့်ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားပါမည်အကြောင်း ဆု တောင်းပါ၏။ နာမတော်၌ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ယောဟန် ၁ဝး ၂၂- ၂၉
"ကျွနု်ပ်အားခိုင်မြဲစွဲကိုင်ဆွဲမည်"၊ (Ada R. Habershon ၁၈၆၁-၁၉၁၈) ရေးစပ်သည်။
(ယောဟန် ၁ဝး ၃၁၊ ၂၇၊ ဂလာတိ ၅း ၆၊ ၁ကော ၂း ၇)
၁။	ပထမအချက်၊ ခရစ်တော်ပေးသောဆုကျေးဇူးရှိသည်။ ယော ၁ဝး ၂၈က၊ ၄း ၁၄၊ ဧဖက် ၂း ၅
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ခရစ်တော်၏ကတိတော်ရှိသည်။ ယော ၁ဝး ၂၈ က၊ ဆာလံ ၁၄၂း ၄၊ ဆာလံ ၉၄း ၁၈။
၃။ တတိယအချက်၊ ခရစ်တော်၏တန်ခိုးရှိသည်။ ယောဟန် ၁ဝး ၂၈ခ၊ ၆း ၃၉၊ ၁ရး ၁၂၊ ကောလေ ၃း ၃